Madaxweynaha Galmudug oo maanta dalka dib ugu soo laabtay. – Radio Daljir
Agoosto 8, 2016 4:20 b 0
Muqdisho, Aug 08 2016–Magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waxaa maanta lagu soodhoweeyey madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo xaalad caafimaad ugu maqnaa dalka India.
Madaxweynaha Galmudug waxaa Garoonka Diyaaradaha Muqdisho ku soo dhaweeyay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdrashiid Cali Sharmaarke iyo Mas’uuliyiin kale oo ka tirsan labada gole ee dowladda Soomaaliya.
Madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa uga mahadceliyey mas’uuliyiinta dowladda Soomaaliya soodhoweynta ay u sameeyeen wuxuuna xusay in xaaladdiisu wanaagsan tahay.
Imaanshaha madaxweynaha Galmudug ee Muqdisho ayaa kusoo aadaya xilli uu magaalada kasocdo shirka hogaamiyayaasha Soomaalida iyadoona maamulkaasi uu u matalayey madaxweyne ku-xigeenkiisu.